MP4 Player for Mac - Olee ka Play MP4 on Mac (Mavericks gụnyere)
Olee otú Play MP4 Videos on Mac OS X (Yosemite gụnyere)
Isiokwu a ga-ewebata top 3 MP4 Player maka Mac, nke na-kpam kpam free mere na ị nwere ike igwu MP4 video on Mac. Ọ dịghị mkpa ka tọghata, Dị nnọọ egwu MP4 on Mac na ọ na-elekọta. Ndị a free MP4 Player maka Mac akwado Snow agụ owuru os. E nwere abụghị ihe ọ bụla nsogbu na-egwu MP4 on Snow agụ owuru. Ọ bụrụ na ọ dịghị MP4 ọkpụkpọ na-arụ ọrụ, dị nnọọ tọghata MP4 ka MOV, nke na-abụkarị playable on Mac na ihe ọ bụla media ọkpụkpọ.
Download Free MP4 Player maka Mac OS X 10.6 Snow agụ owuru
QuickTime bụ a multimedia kpuchie mepụtara Apple Inc., arụli dị iche iche formats nke dijitalụ video (MP4, MOV), media mkpachị, ụda, ederede, na-aga aga, music, na mmekọrịta panoramic oyiyi. Ọhụrụ version bụ QuickTime X (10.0) na bụ nanị dị na Mac OS X v10.6 Snow agụ owuru.
VLC ọkpụkpọ na-akwado niile video na ọdịyo iyi gụnyere MP4. Ị mkpa bụghị wụnye ọ bụla codecs ma ọ bụ nzacha na-egwu .mp4 faịlụ.
Plex Media Center maka OS X
Plex (aka Plexapp), bụ na-emeghe isi media center maka Intel dabeere Apple Macintosh kọmputa, ọ nwere a 10-ụkwụ onye ọrụ interface imewe nke palọ TV.
Akwado akpa formats: AVI, MPEG, WMV, ASF, Flv, MKV, MOV, MP4, M4A, AAC, aku, Ogg, OGM, RealMedia Ram / RM / RV / RA / RMVB, 3gp, VIVO, PVA, NUV, NSV , NSA, FLI, FLC, na DVR-MS (beta nkwado).
Gịnị bụ MP4?
The MP4 faịlụ Ọkpụkpọ na-akọwa nchekwa nke MPEG-4 audio, Mpaghara na multimedia ọdịnaya site na iji na ISO Base Media File Format. The AVC File Format-akọwa nchekwa maka Advanced Video nzuzo (ISO / IEC 14496-10 / AVC) ọkọlọtọ data n'ime faịlụ nke ISO Base Media File Format ezinụlọ. Dị iche iche si yiri mpg / MPEG formats, MP4 video format oji a mma itule n'etiti video àgwà na faịlụ size, nke na-eme MP4 ihe n'ọtụtụ na kọmputa na obere ngwaọrụ.
Ntak apụghị egwu MP4 video faịlụ?
Gị mkpa ndị kwekọrọ ekwekọ codec na-egwu MP4 on Mac. Mgbe gị mgbasa ozi ọkpụkpọ apụghị egwu .mp4 videos, ọ pụtara na ọkpụkpọ apụghị ịchọta onye kwesịrị ekwesị decoder maka faịlụ. Mgbe ahụ ọkpụkpọ nwere ike ịgbalị ibudata kwesịrị ekwesị codec na-egwu azụ faịlụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na-adịghị amị mkpụrụ, ị ga-nwere iji wụnye ọzọ MP4 ọkpụkpọ na-egwu gị videos, ma ọ bụ tọghata MP4 ndị ọzọ video format, dị ka MOV.
> Resource> Mac> Olee otú iji Play MP4 Videos on Mac OS X (Yosemite gụnyere)